Ihe Mere I Ji Chọrọ Iche Garage Door
Meghee & Motors
Ọnụ na-arụzi ụgbọala ụzọ ekpuchi oghere kachasị ukwuu n'ụlọ gị, ọnụ ụzọ a gwara mmanụ ga-enyere aka belata nnyefe nke okpomọkụ ma ọ bụ ikuku oyi n'ime ụgbọala gị. Nke a dị mkpa maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
(1) Ọ bụrụ na ụgbọala gị na-arapara n’ụlọ gị, ikuku dị n’ebe a na-adọba ụgbọala ahụ nwere ike isi n’ọnụ ụzọ gaa ebe obibi gị. Ọnụ ụzọ ụgbọala na-echekwa mkpuchi ga-ebelata nnyefe nke ikuku site na mpụga n'ime.
(2) Ọ bụrụ n ’ị na-eji ebe ndọba ụgbọala gị mere ihe nzụta, nkasi obi gị ga-abụ ihe kacha mkpa. Ọnụ ụzọ ụgbọala na-echekwa mkpuchi ga-enyere aka idobe ọnọdụ okpomọkụ dị na ụgbọala ahụ n'ime oke okpomọkụ dị warara ma e jiri ya tụnyere oke ikuku nke mpụga mpụga.
(3) Ọ bụrụ na ebe ụgbọala gị dị n'okpuru ime ụlọ ọzọ dị n'ụlọ gị, ikuku nwere ike isi n'uko ụlọ ụgbọala ahụ gaa n'ala ụlọ dị n'elu. Ọnụ ụzọ a gwara mmanụ ga-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị na ụgbọala ahụ kwụsie ike iji belata mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị n'elu.
(4) Ọnụ ụzọ ụgbọala na-anọkarị ekpuchi dị jụụ ma nwee ime mara mma karịa ọnụ ụzọ na-abụghị nke mkpuchi.
Kedu ihe bụ R-Value?
R-Bara Urubụ usoro nke nguzogide okpomọkụ eji mee ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe owuwu. Kpọmkwem, uru R bụ nrụgide nke okpomoku na-agba ọkụ. Ọtụtụ ndị nrụpụta na-eji ụkpụrụ R iji gosipụta ike ọrụ ngwaahịa ha. A na-agbakọ ọnụ ọgụgụ a dabere na ọkpụrụkpụ mkpuchi mkpuchi na njirimara kemịkal ya. Ọdịdị R-elu dị elu, nke ka mma ihe na-egbochi ihe nke ihe.
Bestar Model 5000 Series Garage Ọnụ ụzọ, na R Uru 17.10, arụpụtara na 3 oyi akwa ewu (nchara + mkpuchi + ígwè), na-enye ahụkebe ike, ike arụmọrụ, nchara na-eguzogide na mkpọtụ Mbelata. Okpukpo 2 ”nke mkpuchi mkpuchi polyurethane na roba na-eme ka ọnụ ụzọ ndị ahụ dị ọkụ na oyi na-eguzogide ọgwụ, ebe njikọta ire na-aka na-enyere aka mechie ifufe, mmiri ozuzo na snow.
Garage ụzọ Ngwa
Obodo Renqiu, Mpaghara Hebei.
Copyright © Bestar Automatic Doors Co., Ltd. Ikike niile echekwabara